Teendhooyinka Xayeysiinta | Teendhooyinka Xayeysiinta Shiinaha Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha
Teendhada daarta, oo sidoo kale loo yaqaan marquee iyo gazebo, waa aalad xayaysiis ballaaran loo adeegsado. Soo bandhigida cabbirka daabacaadda iyo garaafyada gaarka ah, xayeysiisyada teendhooyinka xayeysiinta ayaa hubaal ah habka ugu waxtarka badan ee kaa dhigaya inaad ka soo dhex baxdo dadka, iyada oo aan loo eegin dhacdooyinka gudaha iyo waxqabadyada bannaanka, sida bandhigyada ganacsiga, xafladaha, dhacdooyinka cayaaraha ama dhacdooyinka ganacsiga dibadda.
Ku qalabeysan yahay jir teendho tayo sare leh, teendhooyinkayada xayeysiinta ah waxay damaanad qaadi karaan xasilloonida xitaa qaar ka mid ah cimilada yar ee dabaylaha wata. Ku habboon dhammaan noocyada adeegsiga gudaha iyo dibedda, haddii ay tahay bandhig ganacsi, bandhig, dhacdo isboorti ama soosaaris cusub. Ka sokow, bacda shaagagga ee sida gaarka ah loo qaabeeyey waxay ka dhigaysaa xirmada teendhada mid ku habboon in lagu wareego.
Teendhada xayeysiinta 10 × 10 ama teendhada pop up waa mid ka mid ah xalka ugu caansan ee soo bandhigida loogu talagalay ku dhowaad dhammaan noocyada dhacdooyinka iyo waxqabadyada.
Teendhada dusheeda waa la daabacay oo la tolay 600D Polyester. Sublimation dheehkeena daabacan dusha sare ee teendhada ayaa xaqiijin kara inaad midab hufan oo qallafsan leh. Haddii aad rabto inaad ka mid ahaato qolka bandhiga ganacsiga, waxaad xaqiiqdii u baahan tahay teendho xayaysiis gaar ah.